12 arrin oo xasaasi ah oo ay tahay inaad ka ogaato xiisadda Turkiga iyo Mareykanka. – Xeernews24
12 arrin oo xasaasi ah oo ay tahay inaad ka ogaato xiisadda Turkiga iyo Mareykanka.
16. August 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa in muddo ah cirka isku shareeray xiisadda Turkiga iyo Mareykanka, marka aad si fiican u akhriso waxaad ogaan-doontaa in arrinta dhaqaale waa ka weyn tahay. Labada dal kalama maarman hadda iyo mar walba.
Haddaba, Halkan Hoose Ka Akhriso, 12 Arrin Oo Ay Tahay Inaad Ka Ogaato Xiisadda Turkiga iyo Mareykanka.
Dagaalka Ciraaq: Labada Dhinac waxaa ay si hoose isugu arkeen faragelint mid walba uu ku sameeyay dalka Ciraaq.
Suuriya: Dalka Turkiga waxaa uu Suuriya ka sameeyay dagaal ka dhan ah Daacish halka Mareykanka ay hub iyo taageero siiyey dagaalyahannada Kurdish-ka. Kooxda uu Mareykanka hubka siinayo waxaa ay Turkiga u taqaan argigixiso.
Andrew Brunson: Waa wadaad Mareykan ah oo 23 sanno ku sugnaa Izmir, Turkiga, ninkan waxaa la xidhay October 2016 kadib markii lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa afgambigii dhicisoobey ee Turkiga iyada oo lagu eedeeyay Jaajuusnimo iyo inuu argigixiso taageerayey. Madaxweynaha Mareykanka Trump waxaa uu ninkan ku sheegay wadaad fiican, oo gardarro lagu xidhay.
Fethullah Gulen: Dhinaca kale, Ankara waxa ay marar badan codsatay in loosoo dhiibo wadaadka Fethullah Gulen oo ah nin dhibaato badan ka geystay gudaha Turkiga, car-qalad joogta ahna ku haaya xasiloonida dalka Turkiga iyo dowladda uu hoggamiyo Erdogan. Turkiga waxaa ay doonayaan in labada nin la isku badasho, laakin Mareykanka aya diidan.
Dhaqaalaha Turkiga: Xilliga la joogo ma xuma dhaqaalihiisa, oo sannadkii waxaa uu sameeyaa kor u kac 3-4% ah, laakin Mareykanka waxaa uu ku hayaa cadaadis. Bangiga dhexe waxaa uu diiday inuu fa’idada kor u qaado, taasina waxa ay leedahay sameynteeda.
Hoos-u-dhaca Liraha: Waxaa hadda jira in dalalka Yurub ee deymaha siiya Turkiga ay wal-wal ka qabaan hoos u dhaca qiimaha Liraha, kaas oo gaaray 40% marka loo eegeo Dollarka Mareykanka.
Arrinta NATO: Turkiga kuma eka xulufo, laakin waa dalka 2aad ee ugu ciidamada badan 29-ka dal ee NATO.
Xuduudda Ciraaq iyo Suuriya: Dagaalka uu Mareykanka ka wado dalalka Ciraaq iyo Suuriya, waxaa uu u baahanyahay in saanad uga timaada dhulka iyo cirka, cidda ka caawin karta waa Turkiga.
Iran: Turkiga waxaa uu xad lala leeyahay Iran, oo Mareykanka ay cadaadis dhinac walbo ku hayaan, waa arrin xun in labadaasi dal ay u heshiiyaan.
Black Sea: Turkiga waxaa uu jooga Black Sea halkaas oo Ruushka ay dhaq-dhaqaaq ka wadaan, waxaan jirta baahi ah in la kala ilaaliyo labadan dal inay xulufo noqdaan.
Qaxootiga: Turkiga waxa uu dunida ka haya 3.2 Milyan oo qaxooti Suuriyaan ah, go’doominta Mareykanka uu ku haayo waa mid ka hor imaaneysa in dadkaasi la caawiyo.
Xidhiidhka Isra’il: Turkiga waxaa uu ku jiraa dalal yar oo muslim ah oo xiriir wanaagsan la leh Isra’il, Mareykanka waa ku qasban yahay inuu arrintaas ka fakiro.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/usa_turkey_cliff__hassan_bleibel.jpeg 556 800 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-16 17:36:452018-08-16 17:36:4512 arrin oo xasaasi ah oo ay tahay inaad ka ogaato xiisadda Turkiga iyo Mareykanka.
Madaxweyne Farmaajo oo hadda ka soo degey garoonka ee dalka Jabuuti. Arrag sawiro Farmaajo & Geele iyo Farmaajo oo la moodo in uu Geele wajiga...